हतार गर्ने बानी अहितकर हुन्छ – Shirish News
तुलसा भट्टराई उदयपुर
तुलसा भट्टराई, उदयपुर
यदि हतार गर्ने बानी तपाईको हो भने यो तपाइको लागि हानिकारक छ । यदाकदा तपाईलाई धेरै हानी पनि हुनसक्छ ।यसको भयकङकर परिणाम पनि तपाईले भोग्नुपर्ने हुनसक्ठ । हतारलाई आफ्नो स्वभावबाट निकालिदिनुस् । शान्ति र धैर्यका साथ आफ्नो काम गर्नुस् ।
हडबडमा काम गर्नाले नोक्सान नै हुन्छ ।हडबढीमा गरिएको काम नोक्सानदायक हुनेछ । गृहणी पनि हडबढीमा पाहुनाको स्वागत गर्छन् या भाडा सफा गर्छन् तब केही न केही नोक्सान सीसाको सामानमा हुनेगर्छ । यो केयौ पटक हुनेगर्छ ।
आफ्नो यो हडबढी र हतारो स्वभावको कारण हामी दुर्घटनाको शिकार हुन्छौ ।वाहन चलाउदा हामीलाई धेरै हडबडी हुनेगर्छ यसै कारण हामी दुर्घटनाको शिकार हुन्छौ ।हडबडीमा सडक पार गर्दा आफ्नो हात खुट्टै गुमाउने गर्छौ या ज्यान गुमाउने गर्छौ ।हडबडीको कारण हामी बाटो हिड्दा ठोकिएर लड्छौ सिढिबाट चिप्लिन्छौ । या धेरै कुरा बिर्सिन्छौ ।हाम्रो हातको सामान खस्छ ।
हतारको काम शैतानको । शैतानको काम सधै उल्टो सीधा हुन्छ । जो मानिस हतार हतार काम गर्छन् उनीहरूले भयानक गल्ती पनि गर्न सक्छन् ।
स्वभावमा हतारो गर्ने बानी हुनु अहितकर हुन्छ । बाहिर जान हतार हतार गरिरहनु भएको छ भने घरबाट निस्केपछि थाहा हुन्छ कि अमुक बस्तु घरैमा छुट्यो । महत्वपूर्ण थियो भने फेरि फर्कनुपर्छ । एउटा सज्जन घरबाट हतारमा सपरिवार निस्किए । स्टेशनमा आएर तब याद आयो टिकट टेबुलमै छुटेछ । ट्रेन पनि गयो ।अब के गर्ने? टिकटको धेरै पैसा बर्बाद भयो ।यही कारण भनिएको हो हतारको काम शैतानको हुन्छ ।
हतारो कहिल्यै नगर्नुस् ।यदी तपाई यस्तो खालको हुनुहुन्छ भने आफूलाई बदल्नुस् ।यस प्रकारको स्वभावबाट छुटकारा पाउनुस् ।तपाईको सुखमय जीवनमा तपाईको सफलताको बाटोमा तपाईको जिन्दगीको लागि यो एक ठूलो दोष हो ।
घरमा बच्चाले या अरू कुनै सानो मानिसले कुनै कुरा असावधानीबस च्यातिदियो,फुटाइदियो त बस । भकाभक पिट्न थाल्छौ,पागल जस्तो कराउन थाल्छौ ।
पर्खनुहोस्! के एक मिनेटको लागी तपाईले यो सोच्नुभएको छ कि यसरी पिटेर जुन बस्तु फुटेको छ त्यो जोडिने या त्यसको भर्पाइ हुन्छ ? फुटेको सामान फुटिसक्यो । अब बेकारमा हतारमा पिटेर के फाइदा? सानोतिनो गाली गरेर र भविष्यमा सावधानीका साथ काम गर्न चेतावनो दिएमा ठीक हुन्छ । यस प्रकारका पिटाइले सानामाथि नराम्रो असर पर्छ ।
हीरा खानीबाट निस्कन्छ । खानीबाट निकाल्दा त्यसको त्यो मुल्य हुदैन, जबसम्म त्यसलाई शुद्ध गरिदैन र त्यसको पालिस गरिदैन ।यति भएपछि त्यसको मूल्याङ्कन ठीक हुन्छ ।हीराको जन्मको गुणलाई बदल्नुपर्छ ।
यसैप्रकार मानिस पनि बदलिनुपर्छ ।शरीर विज्ञानको दृष्टिमा यो मानिएको छ कि हर मानिसमा आफ्नो केही न केही पैतृक गुण हुन्छ ।उसका धेरै गुण,स्वभाव उसले आमाबाबुबाट उत्तराधिकारको रूपमा पाएको हुन्छ ।यति भएर पनि शिक्षा संस्कार पारिवारिक वातावरणको पनि उसमा प्रभाव पर्छ । धेरै कुरासँग साथसंगतको प्रभावले पनि हुन्छ । यसप्रकार अनेकौ प्रकारको परिस्थितिबाट अगाडि बढेर मानिसको स्वभाव बन्छ ।
यो संभव छैन कि दुनिया भरका सारा गुण एउटै मानिसमा होस् या सारा दुर्गुणले ऊ भरिएको होस् ।हर मानिसमा केही न केही दुर्गुण केही न केही राम्रो गुण अवश्य हुन्छ ।ऊ गुण र दुर्गुणको संयुक्त रूप हुन्छ । केहीमा दुर्गुण धेरै राम्रो गुण कम हुन्छ । कसैमा यसको विपरीत हुन्छ ।
हर काम हतारमा हैन धैर्यका साथ गर्नुपर्छ ।अधैर्य या उत्ताउलोपना हानीकारक छ । यसको कारण तपाईको धेरै नोक्सान हुनसक्छ ।धैर्यले काम गर्नुस् ।